ငါတို့အားလုံးတစ်ခုတည်း – မင်းကိုနိုင်… – PVTV Myanmar
ငါတို့အားလုံးတစ်ခုတည်း – မင်းကိုနိုင်
Like – 10K Share – 1507
ပေါက် ကျိုင်း says:
2021-05-17 at 8:37 PM
Saw Win Thu Han says:
2021-05-17 at 8:41 PM
Phyu Phyu Khaing says:
2021-05-17 at 8:43 PM
2021-05-17 at 8:45 PM
Pau Chan Dal says:
လွတ်မထားပါနဲ့ဗျာ…guideline ပေးပါ၊ ဦးဆောင်ပေးပါ။ စက်ခေါင်းတွေက အဆင်သင့်မဖြစ်ကြ သေးဘူး။
လမ်းကြောင်းတည့်သွားရင်၊ ဆက်ရုန်းပါ့မယ်။ လိုအပ်လို့ပြောတာပါဗျာ….
ကိုယ္လိုပဲ ကဗ်ာ စာေပ ခ်စ္သူျဖစ္ေနေသာအခါ
2021-05-17 at 9:53 PM
ကိုမင်းကိုနိုင်၏ ကဗျာများက ပြည်သူအတွက် အားတက်စေရပါသည်။
2021-05-17 at 10:07 PM
2021-05-17 at 10:26 PM
2021-05-17 at 11:10 PM
ဆရာမင်းကိုန်ိုင် လေးစားပါတယ် ကဗျာပေမဲ့ရင်ထဲတိုက်ရိုက်ထိမိပါတယ်
2021-05-18 at 12:44 AM
ကျည်ကုန်ယမ်းကုန်ရိက္ခာကုန်အောင်လုပ် ရင်ဆိုင်ပွဲမနွဲသေးနဲ့ပျောက်ကျားဗျုဟာနဲ့အပိုင်ဖြုတ် စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားနေအောင်တနေ့တမျိုးနဲ့ဒုက္ခပေး (ရန်သူကိုမီးလိုရေလိုကျင့်)အရေးတော်ပုံ အောင်ကိုအောင်ရမည်💪👍👊နာဇီလက်ကနေ စတာလင်ဂရက်မြို့ကို ရှရှားတွေ ဘယ်လို ကယ်တင်ခဲ့တာလဲ ၂ယောက်ကိုသေနတ်၁လက်နှုန်း ကြောက်ပြီးပြန်ပြေးလာရင်မိမိဖက်က ကျည်အဆင်သင့် NUGရေ မြန်မြန်လုပ်ဗျာ စစ်ခွေးအတွေ ကိုအမြစ်ဖြုတ်ခြင်နေပြီ💪👊👍
2021-05-18 at 12:52 AM
2021-05-19 at 1:59 AM
ဆရာ့ တာလီဘန်GZတွေဖောက်ခွဲရေးပညာကိုသေချာကျပ်၂မတ်၂သင်ပေးသင့်ပါတယ် စမ်းသပ်ရင်းသေသွားတာမြေပြင်လေ့လာချက်အရ၇၀ကျော်သေပီးခြေပျက်လက်ပျက်က၁၀၀ကျော်နေပါပီpleaseဆရာသေချာကြပ်မတ်ပေးစေချငါတယ်😢😢😢
2021-05-19 at 1:46 PM
Wendell Parnell says:
တပ်မတော်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၆၂ ကတည်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းနှင့်ယခုမင်းအောင်လှိုင်ဖြစ်သည်။ ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသည်နှစ်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းဒီမိုကရေစီသက်တမ်း ၅ နှစ်သာရှိသည်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုလိုချင်လား။
In Myanmar, the army controls its soldiers’ lives, minds and finances.
The Tatmadaw have been ruling Myanmar since 1962. It was General Ne Win back then, and now Min Aung Hlaing. Nothing has changed. Myanmar has had only5years of Democracy in 60 years. Do you wantachange?